Saturday July 13, 2019 - 08:25:32 in Wararka by Super Admin
Waxaa wali magaalada Kismaayo ka socda weerarkii xooganaa ee shalay gelinkii dambe ka bilaawday Hoteelka Cascaseey.
Dagaalyahanno aad uhubeysan oo katirsan Al Shabaab ayaa weli ka dagaallamaya gudaha Hoteelka iyagoona gacanta ku haya dhammaan dhismayaasha uu Hoteelku ka koobanyahay.
Waxaa markale fashilmay isku dayo ay ciidamada Kenya iyo maleeshiyaadka maamulka 'Jubbaland' ay ku doonayeen in weerarka ay kusoo afjaraan .
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 jeer ay weeraro isdaba joog ah qaadeen ciidamada huwanta ah si ay dib ugula wareegaan Hoteelka balse waa ku guuldareysteen oo dagaalyahanada gudaha Hoteelka ka dagaallamaya ayaa isi adag isaga caabiyay.
Weerarkii ugu dambeeyay ee ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland qaadeen ayaa dhacay xalay 4:00 habeenimo, jabaqda rasaasta iyo qaraxyo isdaba joogga ah ayaa laga maqlayaa gudaha magaalada Kismaayo.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in Meydka qof caddaan ah lagu arkay gudaha Hoteelka waxaa kale oo jira mas'uuliyiin katirsanaa maamulka Axmed Madoobe oo weerarka ku dhintay balse wali tira koob rasmi ah lagama hayo tirada guud ee dadka dhintay.
Weerarkan ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa banaanka soo dhigaya fashilka dhanka amniga ah ee ku habsaday ciidamada Kenya iyo maleeshiyaadka maamulka Axmed Madoobe oo ku guul darraystay in ay ilaaliyaan xarumahooda muhiimka ah.
Sacuudiga oo Fasaxay in Ragga iyo dumarka aan is qabin ay isla jiifan karaan Hoteellada!